Watermark: waa maxay, maxay muhiim u tahay iyo sida loo abuuro tallaabo tallaabo | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqdii in kabadan hal jeer waxaad ku aragtay calaamado sawirro qaarkood. Marar badan, kuwani waxay ku soo beegmaan sawirrada lacagta la bixiyo, maadaama ay ka hor tagayaan isticmaalkooda lacag la’aanta ah (ayna ilaalinayaan xuquuqda qorayaashooda). Laakiin kuwa kale ayaa loo calaamadeeyay xayeysiinta ama xitaa sameynta naqshado naqshadeynta webka.
Laakiin, Runtii maxay tahay astaan-biyood? Sidee muhiim u tahay? Waa maxay isticmaalkeedu? Intaas oo dhan iyo inbadan oo ka mid ah waa waxa aan ka hadlayno xiga.
1 Waa maxay astaan-biyood
2 Maxay astaan-biyood muhiim u tahay?
3 Halkee la dhigayaa astaanta biyaha
4 Astaamaha ugu caansan ee la isticmaalo
5 Sida loo sameeyo tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah
5.1 Abuur calaamadee Photoshop
5.2 Sida loo sameeyo calaamadeyn ereyga
Waa maxay astaan-biyood
Astaan-biyood (Watermarkmark) ayaa dhab ahaan ah farriin ku hartay sawirka oo siineysa qoraa ama magaca qofka ama shirkadda leh xuquuqda sawirkaas.
Si kale haddii loo dhigo, waa astaan, shaabad, saxeex, magac ... daryeelaya adeegsiga shaqooyinka dhijitaalka ah, ilaalinta qofkaas ama shirkaddaas iyo danahooda.
Ugu horreyntii, astaamaha biyo-dhigga waxaa la dhigey aagag aan aragtida sawirka laga carqaladeynin. Laakiin waxaa sii kordheysa in loo adeegsado waxyaabo hufan laakiin waxay ku yaalliin aagag aad u muuqda, mararka qaarkoodna lagu celceliyo, iyada oo ujeedadu tahay in dadku ayan jarin calaamadda loo adeegsado sawirka, sidaas darteed looga boodayo xuquuqda qof kasta oo sameeya ama wax ku iibiya. .
Maxay astaan-biyood muhiim u tahay?
Qiyaas inaad sawir qaadatay oo ay qurux badneyd. Waxaad u gelineysaa shabakadaha bulshada si aad ula wadaagto farshaxankaaga iyo xirfadda dadka aad haysato. Iyo, dhowr maalmood, ama toddobaadyo, ama bilo kadib, waxaad ogaanaysaa sawirkaaga. Buug, bogga internetka, xitaa banki sawir ah oo lagaa qaadayo sawirkaas inaad sameysay x lacag. Lacag aan jeebkaaga ku socon doonin.
Waxaad hubtaa inaad waalato, maxaa yeelay waa sawirkaaga. Iyo la dagaallanka internetka si looga takhaluso dhammaan raadadkeeda waa mid caajis ah, jahwareer leh oo aan macquul ahayn. Taas ka sokow haddii aad ku lug yeelatid qareennada, xitaa way qaali noqon kartaa.
Aad u tiro badan waxay u adeegsadaan calaamadeynta inay u ilaalinayaan xuquuqda lahaanshaha, ama xuquuqda lahaanshaha, cidda sameysa sawirka. Si kale haddii loo dhigo, isku day ayaa la sameeyay si looga niyad jebiyo kuwa kale inay u adeegsadaan sawirkaas maxaa yeelay waxaa ilaalinaya qoraaga.
Taasi macnaheedu maahan inaan qofna isticmaali doonin sawirkaaga? Runtii maahan, marka hore maxaa yeelay waxay ku weydiisan karaan ogolaanshahaaga inay adeegsadaan oo ay iyaga siiyaan; iyo tan labaad maxaa yeelay waxay noqon kartaa hab wadaag ah iyadoo la adeegsanayo astaan-biyood ka caawiya kor u qaadista bogga, astaan ​​shaqsiyeed, iwm.
Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad leedahay meherad qaabeynta webka. Adiguna waxaad abuureysaa sawirro kaladuwan oo qaabab ah oo aad sameysid si aad naftaada u ogaatid. Sawiradani waxay qaadi karaan a calaamadee xayeysiin boggaaga ah si dadka ku jecel waxa aad garaneyso ay u ogaadaan halka laga helo.
Halkee la dhigayaa astaanta biyaha
Meesha calaamaddu ku taal ma aha sax. Mana aha qasab in la dhigo meel go'an oo sawirka ah. Talo ahaan had iyo jeer waxaa la yiraahdaa waa inaad dhigtaa qeyb uusan dhibsaneyn aragtida sawirka, laakiin isla waqtigaas waa la qadarinayaa.
Hadda tani waxay leedahay dhibaato. Ka fikir sawir leh calaamadeyn hoose bidix. Ma dhibayo aragtida sawirka. Laakiin qaar "caqli" ah ayaa sawirka ka qaadi kara, gooyn kara oo u soo gelin kara internetka ama u isticmaali kara danahooda gaarka ah.
Sidaas inkasta oo meelaha ugu fiican ee lagu calaamadeeyo waa dhamaadka hoose ee sawirka (gaar ahaan dhinaca midig), ama gees kasta, way sii kordhaysaa in la dhigo isla xarunta, ama lagu soo celiyo sawirka oo dhan si looga fogaado "khiyaanadan" oo markaa si fiican loo ilaaliyo sawirka.
Astaamaha ugu caansan ee la isticmaalo
Iyo kahadalka noocyada astaamaha biyaha, Ma ogtahay inay jiri karaan dhowr nooc. Hore ayaan uga soo hadalnay qaar ka mid ah laakiin, si aan u caddayno, waxay kala yihiin:
Astaamo-biyoodyo hufan Aad waxtar u leh taasna waxaa lagu dhejin karaa bartamaha sawirka iyada oo aan la carqaladeyn doonin aragtida.
Astaanta shirkadda. Ama astaantaada gaarka ah, si aad ugu xayeysiiso.
Saxeex ganacsi. Waxay u egtahay inaad adigu sameysatid saxeex kuu gaar ah naqshadaha internetka. Waxay sidoo kale noqon kartaa astaantaada.
Calaamado soo noqnoqday Waa in la adeegsadaa isla nooc isku mid ah dhowr jeer sawirka. Tani waxay ka dhigeysaa sawirka inuu lumiyo muuqaal ahaan, laakiin wuxuu ilaaliyaa wax badan.
Sida loo sameeyo tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah
Waxaan diirada saareynaa sida sumad-saar loogu sameeyo sawiradaada. Waxaa jira habab badan oo kala duwan oo loo abuuro astaan-biyood, labadaba barnaamijyo iyo khadka tooska ah.
Haddii aad doorato barnaamijyo, waa macquul taasi kuwa wax ka beddelka sawirka ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto, tusaale ahaan Photoshop, GIMP, Microsoft Paint ... Laakiin sidoo kale kuwa kale sida Word. Haa, kuwani waxay u badan yihiin inay yihiin kuwo aan laga fiirsan, laakiin si kasta waa loo samayn karaa.
Dhinaca kale, waxaad leedahay bogagga onlaynka ah ee kaa caawinaya inaad ku sameysato calaamadeynta sawirradaada. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa PicMarkr, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa kale sida Postcron, IloveIMG, Visual Watermark ... Nidaamkani waa sahlan yahay maadaama kaliya lagaa doonayo inaad sawirka geliso oo aad sameysato sumadda aad rabto qalabkan.
Abuur calaamadee Photoshop
Haddii aad isticmaasho Photoshop, waxaan kuu deyneynaa tillaabooyinka aad qaadi doontid si aad u abuurto. Kuwani waxay aad ugu egyihiin barnaamijyada kale ee tafatirka muuqaalka sida GIMP.
Marka hore, waa inaad furtaa sawirka Photoshop. Kadib fur fayl kale oo cusub, oo ku saabsan 800 × 600 oo leh asal hufan.
Ilbidhiqsigaas waa inaad dhiso sumadda aad rabto, ha ahaato saxiixaaga, magacaaga, degelkaaga, meheraddaada, astaantaada ... Dooro midabka aad rabto iyo, markaad dhammayso, ku dheji dhammaan lakabyada (si marka aad koobiyeynayso aanad u lumin natiijada ugu dambeysa).
Ugu dambeyntiina, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in loo gudbiyo sawirkaaga, ha ahaato isku-darka "Nuqul" iyo "Dheji", ama adigoo gujinaya boodhadhka oo u jiidaya sawirka kale ee aad furtay.
Hadda waa inaad heshaa oo waa diyaar.
Waxaan kugula talineynaa inaad kaydiso feylka halka aad ku abuurtay sawirka oo ah astaan-biyood si markaa markaad u baahato inaad dhigto dhowr sawir, aad sidaa yeeli karto adigoon ka abuurin xoq.
Sida loo sameeyo calaamadeyn ereyga
Ayaa yidhi yaa yidhi Erayga Excel, PowerPoint ... ama barnaamijyo la mid ah (LibreOffice, OpenOffice ...). Saxiixyadan ayaa noqon kara wax yar oo aasaasi ah, waxayna diiradda ku hayaan dukumintiga laftiisa, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo bandhigo shaqada oo ay doonayaan in la dhigo qoraaga sawirrada.
Xaaladdan oo kale, waa inaad tagtaa «Naqshadaynta» / «Watermark». Taasi waxay fureysaa daaqad aad ka dooran karto sida loo dhigo astaanta calaamadeysan, jiif ahaan, jaantus ahaan ... iyo sidoo kale qoraalka aad dhigeyso.
Calaamaddani waa mid hufan oo aan adkayn doonin akhrinta qoraalka, laakiin way ka dhex muuqan doontaa.
Iyo haddii aad rabto inaad ku dhejiso sawirka? Hagaag, waa inaad tagtaa Geli / Sawir. Ku dheji sawirka oo, xulashadiisa, dooro qaabeynta "joogto ah". Sidan ayaad ku qori kartaa qoraalka. Kaliya isticmaal meelaha banaan iyo qoraalka (waxaad ka dhigi kartaa mid weyn, kayar, midabbo, noocyo kaladuwan ...).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Watermark: waa maxay, maxay muhiim u tahay iyo sidii loo abuuri lahaa tallaabo tallaabo
Xayaysiisyada asalka ah